Tag: ụdị kọntaktị | Martech Zone
Kpido: ụdị kọntaktị
Ihe 10 Agencylọ Ọrụ gị Na-efu Na-aga n'Ihu Imebi Ọrụ Gị
Sọnde, Septemba 19, 2010 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Nyaahụ, enwere m obi ụtọ ịme otu ogbako na Spetù Na-ekwu Okwu Mba na mpaghara, nke Karl Ahlrichs duziri. Maka ndị na-ekwu okwu n’ihu ọha, ọ dị oke nkpa inwe ọnụnọ weebụ yana ọtụtụ ndị bịara ya juru anya ịhụ ụfọdụ nnukwu oghere na atụmatụ ha. Ọtụtụ n'ime nke a bụ n'ihi na ụlọ ọrụ agbanweela nke ukwuu… na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-adịghị nọgidere na. Y’oburu n’itinye websaiti, odi ka imepe ulo ahia
Offọdụ nzaghachi m natara n'aka ndị na-agụ bụ na anaghị m enye ọtụtụ nzaghachi gbasara ịde blọgụ Martech Zone. Ya mere - taa, echere m na m ga-ewere ụzọ dị iche ma lee teknụzụ dị gburugburu mmemme ịde blọgụ gị iji nye ndị na-agụ akwụkwọ ndepụta atụmatụ iji nyochaa ma hụ na blọgụ ha nwere. Robots.txt - Ọ bụrụ na ị gaa na mgbọrọgwụ (isi adreesị) nke ngalaba gị, tinye robots.txt na adreesị.